Iincwadi zeNcoko eziPhambili
Ubhala njani isincoko
Ibinzana elingene igama elithi "Kuya kufuneka ndibhale incwadi" yalatha kumbono wento ekhe yaphila njengamava awodwa. Into apho ubungqina obubekwa mnyama kumhlophe buya kwenza oothixo baseOlimpus bangcangcazele. Kukho elinye ibinzana le «Nawuphi na umhla ndiqala ukubhala ...
UNiadela, nguBeatriz Montañez
U-Beatriz Montañez umamele elo lizwi langaphakathi maxa wambi lihamba lisisebezela liye kukhwaza phakathi kwengxolo evela ngaphandle. Kwaye qaphela ukuba apha omnye ugweba ukuba umbonisi we «El Intermedio» ucinga ukuba ukubheja kwakhe kobuchwephesha ngekhe kuphume kakuhle xa ebephelile ...
Ndiyakuvuyela, nguCarlos del Amor
Baze batshabalalise yonke into kwimiboniso yeencwadi. Ndibhekisa kubalinganiswa beendaba abonwatyiswa ngamathamsanqa awahlukileyo kolu ncwadi. Ukusuka Carme Chaparro Nditsho noMonica Carrillo okanye uCarlos del Amor ngokwakhe (Ndiyazinqanda ukukhankanya ezinye iimeko ezingabonakaliyo ezidumileyo, ezitshizayo ...
Imvelaphi yabanye, nguToni Morrison
Ukufika kwindawo yokuziqhelanisa, uToni Morrison ungene kwimibono elula, eyabanye. Umqondo ophelisa imeko yezinto ezinje ngokuhlala kunye kwihlabathi liphela okanye unxibelelwano kuwo onke amanqanaba phakathi kweenkcubeko ezahlukeneyo. Yiyo le nto ngoku, unxibelelwano phakathi kweentlanga, imfundo, ...
Ukujonga nokuCamngca, nguSam Bleakley
Umhleli uSiruela usandul 'ukusinika incwadi yokuDada emanzini aVulekileyo, intshayelelo enomdla elwandle njengendawo phakathi kwezinto ezibonakalayo nezingokomoya kuye nawuphina umntu ongena emanzini olwandle avulekileyo. Ngeli xesha umvakalisi omnye usimema ukuba ...
Ubuzwilakhe ngaphandle koozwilakhe, nguDavid Trueba
Emva kwenoveli yakhe yangaphambili iTierra de Campos, uDavid Trueba uthatha ikhefu xa kufikwa kubuxoki ukuze abonise incwadi ngeminqweno yesincoko sentlalo kunye nenkuthazo. Imalunga nokucinga kancinci malunga nokugqitha, malunga nemilinganiselo yokulingana phakathi kwe-anthropological kunye ...